AMPEFILOHA-AMBATOFOTSY : TELO VOLANA NANAOVANA TAKSIBE ZOTRA «F» VAO FANTATRA FA HALATRA ILAY «SPRINTER»La dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYAMPEFILOHA-AMBATOFOTSY : TELO VOLANA NANAOVANA TAKSIBE ZOTRA «F» VAO FANTATRA FA HALATRA ILAY «SPRINTER»
AMPEFILOHA-AMBATOFOTSY : TELO VOLANA NANAOVANA TAKSIBE ZOTRA «F» VAO FANTATRA FA HALATRA ILAY «SPRINTER»
Fiarakodia nofaohana teny Mahamasina no nanaovan’ireo olon-dratsy fiara fitateram-bahoaka mampitohy an’Ampefiloha sy Ambatofotsy. Ireo pitsopitsony izay tsy noheverina hamantarana ilay fiara no nahatrarana ireo mpangalatra
Tsy kely làlana ny ratsy. Fiarakodia “Sprinter” nangalarina teny Mahamasina no nampiasaina nanaovana fiara fitateram-bahoaka mampitohy an’Ampefiloha sy Ambatofotsy. Ny faran’ny volana aogositra no nalaina andian-jiolahy an-keriny teny an-tànan’ny mpamily, teo Mahamasina, io fiara io ary ny faran’ny volana novambra vao hita.
“Lehilahy roa no nanambana sabatra ny mpamily ary ny mpanampy io mpamily io kosa nasain’izy ireo niankohoka tao ambany seza. Nentin’ny iray tamin’ireo olon-dratsy ny fiara ka rehefa tonga teny Ampefiloha dia noroahiny nivoaka ireo roalahy voatafika”, araka ny fitantaran’ny tompon’ny fiara ny fomba fitrangan’ilay halatra.
Tamin’ny 3 ora maraina no nanatanterahan’ireo mpangalatra izany rehetra izany. Fiarakodia manao fiara fitateram-bahoaka ihany ity very ity saingy nafindran’ireo olon-dratsy vondron-pitaterana hafa. Niova loko ary saika nosoloina avokoa ireo haingony sy pitsopitsony rehetra tao anatin’ilay taksibe. Afaka nampidi-bola nandritra ny telo volana izy ireo vao sarona teny Andoharanofotsy ilay fiara.
Singa bitika ary tsy noheverin’ireo olona nanatanteraka ny halatra ho fantatry ny tompony no namantarana ilay fiara halatra.
“Ny jiron’ilay “Sprinter” sy ny fonon-tseza izay mbola tsy nisolo hatramin’ny nanafarana azy tany ampita no marika tsy azo nihodivirana. Mpamily nikarama moa no tratran’ny polisy teny am-pitondrana ilay fiara ka ity farany ihany no nahafahana namandrihana ilay nilaza ho tompony”, araka ny fanampim-panazavana voaray hatrany.
Lehilahy manodidina ny 40 taona no tonga nanatona teny Andoharanofotsy rehefa nantsoin’ilay mpamily tamin’ny alalan’ny finday. Tonga teny an-toerana tsy nisy fanahiana ity farany ka dia noraisim-potsiny rehefa avy nohamarinin’ny tena tompony ilay fiara. Rehefa nataon’ireo mpanao famotorana moa izay nibabohan’ity lehilahy voatondro ho mpisandoka sy mpangalatra fiaran’olona ity dia nanondro ny vadiny ho atidoha nikotrika ity raharaha maloto ity izy.
Fantatra mantsy fa taratasy fahazoan-dàlana manao fiara fitateram-bahoaka novidiana tamin’ny tambajotra serasera “Facebook” no nananan’izy ireo voalohany. Ilay ramatoa no nahitsoky ny vadiny ho tompon-kevitra tamin’izany. Taorian’izay vao nanomana ilay halatra teny Mahamasina ilay rangahy ka nikaroka lehilahy mba hanatanteraka izany.
Olona efatra izany tamin’ity indray nitoraka ity no tra-tehaka. Taorian’ny fiatrehan’izy ireo ny fampanoavana, ny alatsinainy teo, dia nalefan’ny Fitsarana nidoboka am-ponja eny Tsiafahy ireo roalahy nanao ny fanafihana ary eny Antanimora kosa izy mivady.
Partager la publication "AMPEFILOHA-AMBATOFOTSY : TELO VOLANA NANAOVANA TAKSIBE ZOTRA «F» VAO FANTATRA FA HALATRA ILAY «SPRINTER»"
my response 08/02/2019 at 03:18 Repondre
I simply want to mention I’m all new to blogs and actually savored your web blog. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog post . You absolutely have beneficial well written articles. Bless you for revealing your web-site.
John Deere Service Manuals 10/02/2019 at 00:08 Repondre
Tasia Hoopes 16/02/2019 at 08:09 Repondre
Basilia Thoennes 18/02/2019 at 17:18 Repondre
John Deere Diagnostic and Test Manuals 19/02/2019 at 13:24 Repondre